नेप्से परिसूचक बढ्यो, क–कसले कमाए ? « Naya Page
नेप्से परिसूचक बढ्यो, क–कसले कमाए ?
प्रकाशित मिति :3October, 2019 5:26 pm
काठमाडौं, १६ असोज । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज भने उकालो लागेको छ । बुधबार दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक दशैँअघि शेयर कारोबार गर्ने अन्तिम दिन आज ८.६९ विन्दुले बढेर एक हजार १४९.४० विन्दुमा पुगेको छ ।